नवीन के भट्टराईको एउटा परिचय क्याप पनि हो । कतै गीतभन्दा क्याप बढी चर्चामा आएजस्तो त लाग्दैन ? - Prawas Khabar
नवीन के भट्टराईको एउटा परिचय क्याप पनि हो । कतै गीतभन्दा क्याप बढी चर्चामा आएजस्तो त लाग्दैन ?
मलाई श्रोताहरूले पहिले मेरो गीतले चिन्छन्, गीतकै कारण मलाई नवीन के भट्टराई भनेर चिन्छन् अनि मात्र मेरो क्यापको कुरा आउँछ । यसो भन्नुको अर्थ पहिलो मेरो गीत, दोस्रोमा नवीन के भट्टराई र तेस्रोमा मात्रै मेरो क्यापको कुरा आउँछ । क्यापको पनि चर्चा त हुन्छ, तर क्यापकै मात्र चर्चा भने भएको होइन ।
केही विश्वास जोडिएको छ क्यापसँग तपाईंको ?
मलाई क्यापबारे धेरै प्रश्न सोधिन्छन्, तर मैले अहिलेसम्म कहीँ कतै पनि मैले क्याप लगाउन कहिले र किन सुरु गरेँ भनेको छैन । र, त्यस्तो विश्वास पनि केही छैन । क्याप लगाउन सुरु गर्नुको पछाडि एउटा कारण भने छ ।
यो कुरा २०५२ सालतिरको हो, जतिवेला नेपालमा माओवादीको ‘जनयुद्ध’ सुरु हुन लाग्दै थियो । त्यतिवेला मेरो कपाल निकै लामो थियो । रक एन्ड रोल म्युजिकबाट प्रभावित भएर होला, मैले पनि कपाल लामै पालेको थिएँ । लामो कपाल पालेका रकस्टार हुन्छन् नि ! त्यो समय म ठ्याकै त्यस्तै थिएँ ।
त्यतिवेला अच्युत खरेल प्रहरी प्रमुख हुनुभयो । त्यो समय लामो कपाल पालेकालाई राम्रो नजरले हेरिँदैनथ्यो । लामो कपाल पाल्नेहरू गुन्डा हुन् भन्ने धेरैको मानसिकता थियो । त्यसैले पनि होला, उहाँले लामो कपाल पालेका सबै केटाहरूको कपाल काट्ने अभियान नै चलाउनुभयो । लामो कपाल कसैले पालेको देखेपछि समातेर काटिहाल्ने ।
त्यसमा म पनि परेँ । पुलिसले मेरो कपाल ठुटो बनाइदियो । सधैँ लामो कपाल पालिरहेको मलाई छोटो कपालमा हिँड्नुपर्दा निकै लाज लाग्न थाल्यो । त्यसपछि ठुटो कपाल छोप्नका लागि क्याप लगाउन सुरु गरेँ । त्यसरी क्याप लगाउन सुरु गरेको, पछि त बानी नै भयो । अहिले त क्याप नलगाई हिँड्नै सक्दिनँ । क्याप अभिन्न अंगजस्तै भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म कतिवटा क्याप लगाउनुभयो होला ?
क्याप लगाउन सुरु गरेको करिब २२–२३ वर्ष भयो । यस अवधिमा लगभग दुई हजारजति क्याप लगाएँ होला ।
ती सबै क्याप अहिले पनि छन् त ?
छैनन् । अहिले मसँग करिब दुई–तीन सयवटा जति मात्रै होलान् ।
अनि अरूचाहिँ के गर्नुभयो ?
तीमध्ये धेरै क्याप मैले फ्यानलाई गिफ्ट दिएँ । केही पुराना भएर फालेँ । आफैँलाई धेरै मन परेका केही क्याप भने अझै सुरक्षित छन् ।
फ्यानहरूले कत्तिको माग्छन् ?
धेरै नै माग्छन् । कतिचोटि त सो भएकै वेला पनि दिएको छु । गिफ्टमा पाएको र आफूलाई अत्यधिक मन परेको चाहिँ दिन्न, नत्र दिइरहेको हुन्छु ।
कस्तो कलर प्रिभर गर्नुहुन्छ ?
यही वा त्यही भन्ने छैन । मेरो मुडमा भर पर्छ ।
मुड भन्नाले ?
त्यो त म कुन ठाँउमा सो गर्न जाँदै छु, कुन अवसरमा, कुन मौसममा गर्दै छु भन्ने कुरमा भर पर्छ ।
सबैभन्दा धेरै कुन कलरको क्याप छ ?
यसमा पनि यो वा त्यो नै भन्ने छैन । तर, म धेरैजसो गाढा नीलो र कालो कलर लगाउँछु ।
कुन ब्रान्डको क्याप मन पर्छ ?
मलाई हङकङको नेक्स्ट भन्ने ब्रान्ड मन पर्छ ।
डिजाइन आफैँ गर्नुहुन्छ कि कोही डिजाइनर नै छ ?
पर्सनल डिजाइनर त कोही छैन । तर, मलाई यस्तो डिजाइनको चाहियो भनेपछि उहाँहरूले त्यसैअनुसार बनाइदिनुहुन्छ ।
गिफ्ट पनि धेरैजसो क्याप नै पाउनुहुन्छ होला है ?
मैले पाउने गिफ्टमध्ये सबैभन्दा धेरै क्याप नै हुन्छ । क्यापपछि गितार, पर्फ्युम आदि हुन्छ ।
अाफूचाहिँ गिफ्टमा क्याप दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ?
दिन्छु, कहिलेकाहीँ ।
क्याप कत्तिको लक्की भयो तपाईको गायनमा ?
त्यसरी त सोचेको छैन । तर, क्यापले एउटा छुट्टै पहिचान भने दिएको छ । अब त्यसलाई के भन्न मिल्छ । तर, हानि भने गरेको छैन ।
क्यापले कुनै विवाद निम्त्याएको छ कि ?
क्यापकै कारण विवादै त निम्तिएको छैन । म पहिले कहिलेकाहीँ क्याप पछाडिपट्टि फर्काउने गर्थें । दर्शकले कहिलेकाहीँ आजभोलि पनि त्यसै गरी लगाउनुस् भन्छन् । पटक–पटक सुन्दा कहिलेकाहीँ झर्काे पनि लाग्छ ।
विदेश यात्रामा जाँदा कति जति क्याप बोकेर हिँड्नुहुन्छ ?
तीन–चारवटा । कन्सर्टका लागि एउटा र घुम्न जाँदा या अन्य कुनै ठाउँमा जाँदा अर्कै हुन्छ ।
क्याप मात्रैले दराज भरिएको होला है ?
क्यापकै लागि भनेर दराज त छैन । तर, पहिले सजिलोका लागि क्याप राख्न झ्यालमा डन्डी राखेको थिएँ । तर, अहिलेचाहिँ डन्डी छैन । अहिले श्रीमतीले मिलाएर राखिदिन्छिन् । आनन्द भएको छ ।
क्यापका कारण अप्ठ्यारो परेको छ कि छैन ?
एयरपोर्टमा इमिग्रेसनमा क्याप खोल्नुपर्छ । उनीहरूले अनुहार चिनियोस् भनेर क्याप खोल्न लगाउँछन् । विदेशमा कुनै–कुनै क्लबमा जाँदा पनि क्याप खोल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, वेला भने कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ ।
क्यापबारे कुनै गीत लेख्नुभएको छ ?
धेरैपहिले सोचेको कुरा सम्झाइदिनुभयो । क्यापबारे एउटा गीत बनाउँछु भनेर धेरैपहिले सोचेको थिएँ, पछि बिर्सिएछु क्यारे । गितारबारे एउटा गीत लेखेको छु, तर क्यापबारे छैन । जे होस्, कुनै दिन लेख्नेछु ।
क्याप नलगाउँदा नचिनिएको क्षण त छैन ?
कहिलेकाहीँ हुन्छ । मलाई क्यापमा नभएको वेला कसैले देख्यो भने, ‘तपाईं नवीन के भट्टराई होइन ?’ भनेर प्रश्न गर्छन् । क्याप नलगाउँदा भन्दा बढी मलाई कसैले सेभ गरेको देख्दा चिनिरहेका हुँदैनन् ।
‘होमवर्क’ गर्दागर्दै पुरिए बालक, ठाँटीबजार शोकमा डुब्यो
बस र ट्रक जुध्दा २८ घाइते
वीरगञ्जमा आलागी, १ घर जलेर नष्ट
के हो मस्तिष्कघात, किन हुन्छ र के हुन् लक्षण ?
शीर्षक – तिमि गऐपछि